नेपाल प्रहरीले पायो ‘डिजिटल गर्भनेन्स अवार्ड’
काठमाडौं, २८ कात्तिक । सूचना प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गरी कार्य गरेबापत सरकारी संस्थालाई दिइने ‘डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड’ नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरेको छ ।
जापानस्थित एशियन–ओसिएनियन कम्युटिङ इन्डष्ट्री अर्गनाइजेसनद्वारा प्रदान गरिने ‘एशोसिओ डिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड–२०१८’ प्राप्त गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
जापानको टोकियोमा कात्तिक २२ गते भएको एशोसिओ समिटमा कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासङ्घका कार्यकारी सदस्य डा. अभिजित गुप्ताले ग्रहण गरेको उक्त अवार्ड बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई हस्तान्तरण गरे ।
संस्थाले एशोसिओ आउटस्टयाण्डिङ कम्पनी, आउटस्टयाण्डिङ युजर अर्गनाइजेशन, डिजिटल गभर्नमेन्ट र आइसिटी एजुकेशन गरी चार विधामा अवार्ड वितरण गर्ने गर्छ । त्यसमध्ये नेपाल प्रहरीले सूचना प्रविधि क्षेत्रको महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त गरेको हो ।
सदस्य राष्ट्रबीच आइसिटी इन्डस्ट्रीलाई प्रवर्दद्धन गर्दै आपसी तथा व्यापारिक सम्बन्ध बलियो बनाउने उद्देश्यले जापानमा सन् १९८४ मा उक्त संस्था स्थापना भएको हो । संस्थामा एशिया र ओशिएनियाका २४ देशका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी संस्था आबद्घ छन् ।
यसअघि २०७५ भदौ १ गते नेपाल प्रहरीले ‘डिजिटल गभर्नेन्स अवार्ड-२०१८’ प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेको आधारमा नेपाल प्रहरीले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेको हो ।
Tagsडिजिटल गभर्नमेन्ट अवार्ड नेपाल प्रहरी
कमदारहरुले कतारमा तीन पटकसम्म रोजगारदाता फेर्न पाउने
जनयुद्धका चिठीहरु समेटिएको पुस्तक प्रचण्डले विमोचन गर्दै
सपनालाई धम्की दिने विनयजङ्गलाई साईबर क्राईमको मुद्दा
निगम सुधारका एकजना सुत्रधार : पाइपलाइनको परियोजना पूरा गरेपछि थानकोटमा चमत्कार !
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल बैंकर्स संघबीच सहकार्यको लागी सम्झौता
३१ सहसचिवको सरुवा, कसको कहाँ सरुवा भयो ? (सूचीसहित)
एन आई सी एशिया बैङ्कको चमत्कारिक बचत खाता योजनाअन्तर्गतको बीमा रकम भुक्तानी
नेकपाद्वारा सबै जिल्ला सदरमुकाममा बिहान ८ बजे कार्यक्रम गर्न निर्देशन
विभाजित नेकपा अब एक होला त ?
नेपाली कांग्रेस अब के गर्छ ?
केपी ओली समूहले बोलायो स्थायी कमिटी बैठक
सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुने छैन : सूर्य थापा
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले बोलायो संसदीय दलको बैठक
प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलो नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनुहोस् : वामदेव गौतम